တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေ – Trend.com.mm
Posted on March 25, 2018 March 20, 2018 by San Wadi Hnin
မကြာခဏတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလေ့ရှိလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ့်အနီးမှာဘယ်သူမှမရှိတော့သလို “ဝေးလွင့်ကင်းကွာနှစ်တစ်ရာ” ထဲက နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ အာကာဒီယိုဘူဝမ်းဒီးယားလို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးက ကိုယ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေပြီလား။ ဒါက ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ဘယ့်နှာတုန်း အထီးကျန်နေတာကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာလား။မဟုတ်ပါနော်။အထီးကျန်တာဟာကောင်းတယ်လို့မိမိမပြောခဲ့ဖူးပါ။ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါ။အထီးကျန်ခြင်းနဲ့တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေခြင်းဟာ သကြားနဲ့ဆားလိုပဲ အပြင်ပန်းတူသလိုလိုနဲ့တကယ်တော့တခြားစီပါ။ အထီးကျန်တယ်ဆိုတာက စိတ်ခံစားမှုသက်သက်ပါပဲ။ လူတွေအများကြီးနားမှာရှိနေရင်းနဲ့ ရှိုးပွဲတစ်ခုထဲမှာရောက်နေရင်းနဲ့လည်းရင်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့သလိုဟာတာတာကြီးဖြစ်နေတတ်တာပါပဲ။တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာပါ။စိတ်ထဲမှာကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူရှိနေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတိုင်းလည်းသူအထီးကျန်နေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ မှတ်ထားနော်။နောက်ဆိုအပျိုကြီးလူပျိုကြီးတွေကို ဘယ်တော့စားရမှာလဲတွေဘာတွေလျှောက်မမေးနဲ့တော့ 😛
ရေးရင်းနဲ့ချော်တောငေါ့ကုန်ပါပြီ။ပြောချင်တာက တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေခြင်းမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘာတွေလဲဆိုတော့….
ကိုယ့်ကိုပြောမယ့်ဆိုမယ့်သူမရှိ၊အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊တစ်ယောက်တည်းစာအုပ်ဖတ်မလား တီဗီကြည့်မလား။ကြိုက်တာသာလုပ်ကိုယ့်လူ။ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်လာသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းထိန်းသိမ်းတတ်လာစေပါတယ်။ အိမ်ကိုဘယ်နှစ်နာရီထက်နောက်ကျပြီးပြန်ရင်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုး၊ ဘာတွေစားရင်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်အတွက်လိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေမယ့်သူတွေမရှိတဲ့ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘဝမှာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်အရင်ကထက်ပိုသိလာပြီးတော့ ကိုယ်ဘာတွေအားနည်းနေသလဲ ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာလည်း မြင်သာထင်သာရှိတဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တည်ဆောက်ရာမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကတော့ သေချာတဲ့အချက်ပါပဲ။ လူတွေအများကြီးနဲ့ပြွတ်သိပ်ပြီးနေရတဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေအများကြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးသဖြင့်ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အာရုံစိုက်စရာတွေများလွန်းတဲ့နေရာတွေမှာ တီထွင်ညဏ်တွေကကွန့်မြူးလေ့မရှိတတ်ပါဘူး။တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်နေရတဲ့ ပင်လယ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်တော့ မရှိတဲ့တီထွင်ညဏ်တွေတောင်အစကလေးတွေပြူတစ်ပြူတစ်လုပ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပြောတာယုံပါ။ ဒါကြောင့်် စာရေးဆရာတွေပန်းချီဆရာတွေက တိတ်ဆိတ်မှုကိုနှစ်သက်တတ်ကြတာပါ။
နှောက်ယှက်မယ့်သူတွေမရှိတာကြောင့််ရော ပျင်းပျင်းနဲ့အလုပ်တွေချည်းကုန်းရုန်းလုပ်နေတာကြောင့်ရော နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်သွားရင်းနဲ့လုပ်စရာတွေမကျန်တော့အောင်ကိုပြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။အာရုံများစရာမရှိလို့ တစ်ခုတည်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်တာကြောင့် အလုပ်မြန်မြန်ပြီးတာလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဆိုတော့လည်း တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရခြင်းဟာ နှစ်သက်စရာပါပဲ။
ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ..ဘယ်သူ့ကိုပဲတိုင်ပင်တိုင်ပင် ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေကို ကိုယ်နဲ့ကိုယ်သာတိုင်ပင်ရာဆိုတဲ့အတိုင်း နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတာပါ။မှန်လည်းကိုယ့်ကံ မှားလည်းကိုယ်ခံကိုး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တကယ်တမ်းဘာလိုချင်တာလဲ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးပြီး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ လွပ်လပ်တဲ့နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအနှောင်အဖွဲ့ကင်းတဲ့အရသာကိုသိသွားတဲ့လူတွေဟာ ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲကို တစ်ခေါက်ပြန်မဝင်ချင်တော့သလို အပြုံးတုတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးရေစီးကြောင်းကြီးထဲမှာလည်း နောက်ထပ်တစ်ခါ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့မျောမပါချင်ကြတော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာက တကယ်အေးချမ်းပြီး အာရုံနောက်စရာတွေမရှိတာကြောင့််ပါ။
မကှာခဏတစယြောကတြညြးဖှစနြလရှေိ့လား။ ကမျဘာပေါမြှာ ကိုယြ့အနီးမှာဘယသြူမှမရှိတော့သလို “ဝေးလှငြ့ကငြးကှာနှစတြစရြာ”ထဲက နောကဆြုံးကနွခြဲ့တဲ့ အာကာဒီယိုဘူဝမြးဒီးယားလို တစကြမျဘာလုံးမှာတစယြောကတြညြးဆိုတဲ့ခံစားမှုမွိုးက ကိုယနြဲ့အကွှမြးတဝငဖြှစနြပှေီလား။ ဒါက ကောငြးတဲ့အခကွပြါ။ ဘယြ့နှာတုနြး အထီးကနွနြတောကောငြးတယလြို့ပှောနတောလား။မဟုတပြါနြော။အထီးကနွတြာဟာကောငြးတယလြို့မိမိမပှောခဲ့ဖူးပါ။ တစယြောကတြညြးဖှစနြတောကောငြးတယလြို့ပှောတာပါ။အထီးကနွခြှငြးနဲ့တစယြောကတြညြးဖှစနြခှငြေးဟာ သကှားနဲ့ဆားလိုပဲ အပှငပြနြးတူသလိုလိုနဲ့တကယတြော့တခှားစီပါ။ အထီးကနွတြယဆြိုတာက စိတခြံစားမှုသကသြကပြါပဲ။ လူတှအမွေားကှီးနားမှာရှိနရငြေးနဲ့ ရှိုးပှဲတစခြုထဲမှာရောကနြရငြေးနဲ့လညြးရငထြဲမှာ ဘာမှမရှိတော့သလိုဟာတာတာကှီးဖှစနြတတေတြာပါပဲ။တစယြောကတြညြးဖှစနြတောကတော့ ရုပပြိုငြးဆိုငရြာအရ တစယြောကတြညြးဖှစနြတောပါ။စိတထြဲမှာကိုယခြစွတြဲ့သူနဲ့အတူရှိနတောလညြးဖှစရြငဖြှစနြနေိုငတြာပါပဲ။ လူတစယြောကဟြာ တစယြောကတြညြးဖှစနြတေိုငြးလညြးသူအထီးကနွနြတယေလြို့သတမြှတလြို့မရပါဘူး။ မှတထြားနြော။နောကဆြိုအပွိုကှီးလူပွိုကှီးတှကေို ဘယတြော့စားရမှာလဲတှဘောတှလွှေောကမြမေးနဲ့တော့ 😛
ရေးရငြးနဲ့ခွောတြောငေါ့ကုနပြါပှီ။ပှောခငွတြာက တစယြောကတြညြးဖှစနြခှငြေးမှာလညြးကောငြးကွိုးတှတေောတြောမြွားမွားရှိနတယေဆြိုတာပါပဲ။ ဘာတှလေဲဆိုတော့….
ကိုယြ့ကိုပှောမယြ့ဆိုမယြ့သူမရှိ၊အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊တစယြောကတြညြးစာအုပဖြတမြလား တီဗီကှညြ့မလား။ကှိုကတြာသာလုပကြိုယြ့လူ။ တစယြောကတြညြးနခှငြေးအားဖှငြ့ ကိုယြ့တာဝနကြိုယယြူနိုငလြာသလို ကိုယြ့ကိုယကြိုယလြညြးထိနြးသိမြးတတလြာစပေါတယြ။ အိမကြိုဘယနြှစနြာရီထကနြောကကြပွှီးပှနရြငကြိုယြ့အတှကမြကောငြးဘူးဆိုတာမွိုး၊ ဘာတှစေားရငဘြယလြိုဖှစတြတတြယဆြိုတာမွိုး ကိုယြ့အတှကလြိုကပြှီးလုပပြေးနမယြေ့သူတှမရှေိတဲ့ တစယြောကတြညြးနရတေဲ့ဘဝမှာ ကိုယြ့အကှောငြးကိုယအြရငကြထကပြိုသိလာပှီးတော့ ကိုယဘြာတှအေားနညြးနသလေဲ ဘာတှလေိုအပနြသလေဲဆိုတာလညြး မှငသြာထငသြာရှိတဲ့အပှငကြိုယြ့ကိုယကြိုယတြညဆြောကရြာမှာလညြး အထောကအြကူဖှစစြပေါတယြ။
ဒါကတော့ သခွောတဲ့အခကွပြါပဲ။ လူတှအမွေားကှီးနဲ့ပှတသြိပပြှီးနရတေဲ့အိမမြှာပဲဖှစဖြှစြ လူတှအမွေားကှီးသှားလာလှုပရြှားနတေဲ့နရောမွိုးမှာပဲဖှစဖြှစြ အထူးသဖှငြ့ဆူညံပှကလြောရိုကနြတေဲ့နရောတှမှော အာရုံစိုကစြရာတှမွေားလှနြးတဲ့နရောတှမှော တီထှငညြဏတြှကကှေနြ့မှူးလမေ့ရှိတတပြါဘူး။တိတဆြိတအြေးခမြွးနတေဲ့အခနြးထဲမှာ ဒါမှမဟုတြ မကွစြိတစဆြုံးမှငနြရတေဲ့ ပငလြယကြှီးရဲ့ဘေးမှာဆိုရငတြော့ မရှိတဲ့တီထှငညြဏတြှတေောငအြစကလေးတှပှေူတစပြှူတစလြုပလြာတတပြါတယြ။ကိုယပြှောတာယုံပါ။ ဒါကှောငြ့ စာရေးဆရာတှပနြေးခွီဆရာတှကေ တိတဆြိတမြှုကိုနှစသြကတြတကြှတာပါ။
နှောကယြှကမြယြ့သူတှမရှေိတာကှောငြ့ရြော ပငြွးပငြွးနဲ့အလုပတြှခညြွေးကုနြးရုနြးလုပနြတောကှောငြ့ရော နှစခြုစလုံးဖှစနြိုငပြါတယြ။တစယြောကတြညြးဆိုတော့ ကိုယြ့စိတကြူးလေးနဲ့ကိုယတြစခြုပှီးတစခြုလုပသြှားရငြးနဲ့လုပစြရာတှမကေနွတြော့အောငကြိုပှီးသှားတာလညြးဖှစနြိုငတြာပါပဲ။အာရုံမွားစရာမရှိလို့ တစခြုတညြးကိုအာရုံစိုကနြိုငတြာကှောငြ့ အလုပမြှနမြှနပြှီးတာလညြးအမွားကှီးဖှစနြိုငတြာပဲ။ ဘယလြိုပဲဖှစဖြှစြ ဒီလိုဆိုတော့လညြး တစယြောကတြညြးဖှစနြရခှေငြးဟာ နှစသြကစြရာပါပဲ။
ဘဝရဲ့အရေးကှီးတဲ့ဆုံးဖှတခြကွတြှေ..ဘယသြူ့ကိုပဲတိုငပြငတြိုငပြငြ ဝဝဝေေါးဝါးဖှစနြရတေဲ့ဆုံးဖှတခြကွမြွိုးတှကေို ကိုယနြဲ့ကိုယသြာတိုငပြငရြာဆိုတဲ့အတိုငြး နောကဆြုံးမှာ ကိုယြ့ဟာကိုယပြဲစဉြးစားဆုံးဖှတရြတာပါ။မှနလြညြးကိုယြ့ကံ မှားလညြးကိုယခြံကိုး။ ဒါကှောငြ့ ကိုယတြကယတြမြးဘာလိုခငွတြာလဲ ဘာဖှစခြငွတြာလဲဆိုတာကို ကိုယြ့ကိုယကြိုယမြေးပှီး မှနကြနတြဲ့ဆုံးဖှတခြကွတြှခမွှေတနြိုငပြါတယြ။
တစယြောကတြညြးဖှစနြရခှေငြးရဲ့ လှပလြပတြဲ့နှစခြှိုကဖြှယကြောငြးပှီးအနှောငအြဖှဲ့ကငြးတဲ့အရသာကိုသိသှားတဲ့လူတှဟော ရှုပထြှေးပှလေီတဲ့လူ့အဖှဲ့အစညြးကှီးထဲကို တစခြေါကပြှနမြဝငခြငွတြော့သလို အပှုံးတုတှနေဲ့ ဆကဆြံနရတေဲ့ လူမှုဆကဆြံရေးရစေီးကှောငြးကှီးထဲမှာလညြး နောကထြပတြစခြါ ယကကြနယြကကြနနြဲ့မွောမပါခငွကြှတော့ပါဘူး။ တစယြောကတြညြးနရတောက တကယအြေးခမြွးပှီး အာရုံနောကစြရာတှမရှေိတာကှောငြ့ပြါ။